विश्व फुटबल कोरोनासँगै अघि बढ्दा नेपाली फुटबल किन पछाडि ? - २५ भाद्र २०७७, NepalTimes
विश्व फुटबल कोरोनासँगै अघि बढ्दा नेपाली फुटबल किन पछाडि ?
२५ भदौ, काठमाडौँ ।
युरोपियन राष्ट्रमा यतिबेला खेलाडी बजारले फुटबल तरङ्गित बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) को मापदण्डलाई अपनाउँदै फुटबल गवितविधि फर्किएका छन् । केहीले नयाँ सिजन सुरु गरिसकेका छन् भने केहीले तयारीलाई तीब्रता दिइरहेका छन् । तर नेपालमा भने अझै अनिश्चित छ । सरकारले जारी गरेको निर्देशनका कारण फुटबल भर्चुअलमा खुम्चिँदै छ ।
एसियाली राष्ट्रमा महामारीको प्रकोप नदेखिएको भए यति वेला राष्ट्रिय टोलीले कतार विश्वकप छनोटका लागि अभ्यासलाई तीब्रता दिइरहेको हुन्थ्यो । अभ्यास थाल्न नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले काठमाडौ उपत्यका र उपत्यका भन्दा बाहिर गएका खेलाडीलाई भेला पनि पारेको थियो । तर विश्वकप छनोट खेल स्थगित भएपछि काठमाडौं आएका खेलाडी निराश हुँदै घर फर्किए । फुटबलमा फर्किन आतुर भएका खेलाडी फिटनेसको विषयमा चिन्तित देखिएका थिए । अहिले अन्यौलको अवस्थामा प्रदेशका प्रशिक्षकहरुबीच अनलाइन मिटिङ गरिरहेको र जिल्लाका प्रदाधिकारीहरुसँग पनि छलफलको क्रममा रहेको एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताए । छलफल पछि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने उनको भनाई छ ।
खेलाडी फुटबलमा फर्किन आतुर भए जस्तै एन्फा पनि गतिविधि सुचारु गर्न आतुर नै छ । तर सरकारले लगाएको अंकुस र महामारीले गर्दा अन्योल देखिएको छ । एन्फाले सरकारबाट अनुमति पाए डब्ल्यूएचओ र फिफा गाइडलाइनलाई पूरा गर्दै फर्किन सकिने अध्यक्ष शेर्पाले बताए ।
युरोपमा कोरोना कहरकै बीच फुटबल सहित खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा आईसक्दा छिमेकी देशहरुमा समेत डब्ल्यूएचओको प्रोटोकल अनुसार खेलकुद गतिविधि अघि बढ्न खोज्दैछन । तर नेपालमा भने खेलाडी घरेलु अभ्यासमा सिमित छन् । खेलकुदका जिम्मेवार निकायले कोरोना कहरको कारण देखाउँदै विकल्पको बाटो नदेखाउने हो भने प्रतियोगितामा सहभागि हुन खेलाडीलाई फिटनेसको समस्या आवश्य देखिन्छ । त्यसको असर नतिजामा सहज रुपमा पर्नेछ ।
६ दिनसम्म उठेन सम्झनाको शव, कोरोना देखिएपछि बुबा क्वारेन्टाइनमा
बलात्कारमा हजुरबुवादेखि छिमेकीसम्म संलग्न
अन्तःशुल्कको स्टिकर नेपालमै छापिँदै, तीन सुरक्षा घेराभित्र छपाइ गरिने
अनशन बसेको ९ वर्ष भयो : सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
आज विश्व मुटु दिवस मनाइँदै
आईपीएल : सुपर ओभरमा बेंगलोरको जित
सातै प्रदेशमा विशेष कृषि केन्द्र स्थापना गर्न इजरायलसँग सम्झौता हुँदै
ओम्नीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश
सरकारले भन्यो- कोरोनाको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सकिन्न
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै : अस्पताल
वहसमा रेल्वे बोर्ड , कार्यकारी समितिका विषयमा विवाद
नेपालमा पनि मृत्युदण्डको तयारी, बन्यो अध्ययन समिति
आयो एसिडविरुद्धको कडा कानुन, अब रोकिन्छ कि एसिड आक्रमण